RIKOODHADII laga diiwaan geliyey guushii ay kooxda Barcelona ka gaartay Atletico Madrid ee La Liga – Gool FM
RIKOODHADII laga diiwaan geliyey guushii ay kooxda Barcelona ka gaartay Atletico Madrid ee La Liga
(Madrid) 26 Feb 2017 – Kooxda Barcelona ayaa Atletico Madrid guul kaga soo gaartay garoonka Vicente Calderon, kulan ka tirsan horyaalka La Liga oo ay booqatay, waxaana ay uga soo badisay 2-1.
Barcelona ayaa goolka la horreysay waxaana u dhaliyey Rafinha 64’daqiiqo, laakiin waxaa ka daba keenay 70’daqiiqo Godin, kulanka ayaana noqday barbaro 1-1.
Goolka ay guusha ku qaadatay Barcelona waxaa 86’daqiiqo u dhaliyey Messi, kulanka ayaana ku soo dhammaaday 2-1 ay ku adkaatay Barca oo sidaas hoggaanka ugu qabtay si ku meel gaar ah inta ay ka ciyaarayso Real Madrid caawa.
>- Lionel Messi ayaa 13 gool ku dhaliyey garoonka Vicente Calderon, waana in ka badan garoomada kale oo uu booqday, iyadoo Santiago Bernabéu uu ku dhaliyey 12 gool tartammada oo dhan.
>- Lionel Messi ayaa 22 gool ka dhaliyey Atletico kulamada uu ku wajahay La Liga waana kooxda uu ugu jecel yahay tartankan oo uu goolasha ugu badan ka dhaliyey.
>- Messi ayaa guushii 400-aad caawa la gaaray kooxdiisa Barcelona.
>- Lionel Messi ayaa dhaliyey 20 gool iyo wax badan horyaalka sagaal xilli ciyaareed oo xiriir ah La Liga.
>- Rafinha ayaa dhaliyey goolkiisii ugu horreeyey Barcelona tan iyo bishii October, markaasoo uu ka dhaliyey Granada, waxaana uu caawa soo gabagabeeyey 12 kulan oo uu gool la’aan ahaa.
>- Rafinha ayaa dhaliyey 6 gool oo ka yimid 8 shuut oo bartilmaameed toos ah oo uu ka sameeyey La Liga xilli ciyaareedkan.
>- Koke oo ka tirsan Atletico Madrid ayaa loo diiwaan geliyey caawa 50 gool caawin horyaalka La liga tan iyo xilli ciyaareedkii 2012/13, kaliya waxaa ka badan Lionel Messi oo tan iyo markaas sameeyey 61 gool caawin.
>- Diego Godín ayaa labo gool kaga dhaliyey Barcelona horyaalka La Liga, labada goolna waxa uu uga dhaliyey madax.
>- Barcelona ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay qeybta hore ee ciyaarta 13 kulan oo xiriir ah horyaalka La Liga.
GOOGOOSKA: Inter Milan vs AS Roma 1-3 (Roma oo Inter raaskeeda ku rukhuustay)